Accueil > Gazetin'ny nosy > Filoha Hery Rajaonarimampianina: Ho entiny aiza ity firenena ity?
Filoha Hery Rajaonarimampianina: Ho entiny aiza ity firenena ity?
Mieritreritra ny Malagasy rehetra fa ampy izay efa-taona nitondran’i Hery Rajaonarimampianina ny firenena izay. Nentin’ity filoham-pirenena ity tany amin’ny hantsana mangitsokitsoka ny vahaoka Malagasy. Noheverina fa afaka tsara hitondra ny firenena amin’ny fanavotana azy ingahy Hery Rajaonarimampianina raha toa ka natolotr’ingahy Andry Nirina Rajoelina izay filohan’ny tetezamita izay namany nahatoky azy.
Tao anatin’ny efa-taona izay nitondrany izay nefa dia fijaliana tanteraka no nahazo ny vahoaka Malagasy. Tsy fandriam-pahalemana tsy misy fiatoany na an-tanàn-dehibe na any ambanivohitra. Tsy nandeha namonjy hôpitaly intsony ny ankamaroan’ny Malagasy fa lasa nivarilavo amin’ny ravin-kazo sy ny mpitsabo Malagasy satria tsy nanana ny fahefa-mividy tamin’izany intsony. Nitombo izay tsy izy ny isan’ny olona bado satria be dia be ny mpianatra no nitsoaka an-daharana ka tsy nahavita ny ambaratonga voalohany intsony. Halatra, fanodinkodinam-bolam-panjakana, kolikoly ary fanaparam-pahefana no nanjaka teto amin’ny firenena nandritr’izay efa-taona nitondrany izay. Tsy hay tenenina intsony ny fidangan’ny vidim-piainana satria hatramin’ny vary avy no nisondrotra hatrany amin’ny 100%. Misy tafakatra hatrany amin’ny 200% ka hatrany amin’ny 300% aza amin’ny toerana hafa.
Ity fanjakana notarihin’ingahy Hery Rajaonarimampianina ity koa no nahitana mpitondra fanjakana voarohirohy amin’ny raharaha maizina teto amin’ny firenena hatramin’izay. Tsy ny mpanatanteraka ihany na ireo mpiasam-panjakana ambony, fa hatrany amin’ny olom-boafidy fa indrindra ireo parlemantera. Nanjaka teto Madagasikara hatramin’ny taona 2014 ny raharaha fanondranana harem-pirenena tsy ara-dalàna any ivelany, fanondranana rongony, fanafihana olona amin’ny alalan’ireo mpiambina manokana, fanaovana takalonaina. Omaly faha 17 janoary 2018 aza dia mbola nitranga izany teo Antanimena teto anoloan’ny trano fiasan’ny La gazette de la Grande Ile.
Tsy voafehin’ingahy Hery Rajaonarimampianina tanteraka ny fitantanana ny firenena. Ny olona rehetra izay tafaresaka aminay dia milaza avokoa fa tsy izy intsony izao fitondrana izao. Impiry moa ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina ity no manana raharaha maloto any amin’ny firenen-kafa. Isan’ny nanamarika izany ny raharaha andramena izay nahavoatonontonona ny fitondrana Malagasy, toa ny nitranga tany Singapour. Toa izany ilay vola nahavoarohirohy mpitondra ambony Malagasy tany Paris iny taona vitsy lasa izay, ary amin’izao fotoana izao dioa voatonontonona indray ny fanjakana Malagasy tarihin’ingahy Hery Rajaonarimampianina amin’ilay kolikoly avolenta izay amparita’i Houcine Arfa any Frantsa amin’izao fotoana izao.
Mihena izay tsy izy ny sandan’ny vola Malagasy amin’izao fotoana izao ka lasa 4000 ariary ny euro iray. Mahazo vahana amin’ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny harena ankibon’ny tany eto Madagasikara ataon’ny Sinoa ka manao izay tiany hataony izy ireo.
Tsy tsapan’ingahy Hery Rajaonarimampianina sy ny namany izany zava-doza marobe mahazo ny firenena izany. Tsy misy intsony ny mankasitraka ny hilatsahany ho filoham-pirenena intsony ny Malagasy afa-tsy ireo izay mpiara-miasa aminy. Mbola mikiry hitondra an’i Madagasikara fanindroany indray nefa ingahy Hery Rajaonarimampianina. Dia hoy ny fanontaniana apetraka ny Malagasy maro hoe: “ho entin’ity rangahy ity aiza indray ity Firenena ity?”.